PSJTV | ‘अनियमितता र गलत गर्नेलाई कारबाही’
‘अनियमितता र गलत गर्नेलाई कारबाही’
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग मन्त्रालयका काम–कारबाहीसम्बन्धी विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय खाद्यवस्तु खान पाउने संवैधानिक अधिकारअनुसार नै मन्त्रालयले बजारमा अनुगमन बढाएको बताउँदै अनियमितता र गलत गर्नेलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराए ।
जनतालाई अखाद्य होइन, खाद्यपदार्थ नै खुवाउने मन्त्रालयको योजना सुनाउँदै उनले चाडबाडमामात्र नभइ निरन्तरता दिने उद्देश्यले अनुगमन गर्ने योजना बनाइएको बताए । बैठकमा सांसद उमा रेग्मीले खाद्यपदार्थमा अखाद्य पदार्थको मिसावट बढेको र उपभोक्ताले शुद्ध खानेकुरा नपाइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले के कदम चालिरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सांसदद्वय डा. डिला संग्रौला र रंगमती शाहीले पूरक प्रश्न गर्दै अनुगमनले काम नगरेको र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न अझ कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । जवाफमा मन्त्री यादवले कालाबजारी नियन्त्रण गर्न योजनामात्र नभइ काम पनि गरेको र अनुगमन गरी कारबाहीसमेत गरिएको बताए ।
जवाफमा मन्त्री यादवले गुणस्तरका लागि प्राविधिक टोली गठन गरिसकिएको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । साथै, उनले विगतदेखि बिग्रेका, भत्केका सबैमा सुधार गर्दै अघि बढेकाले सबै एकैचोटी नहुने उल्लेख गरे । सांसद रामबहादुर विष्टले अछामको विनायक नगरपालिकामा पाइने अतिमूल्यवान पत्थर काइनेटको चोरी–निकासी रोकथाम गर्न सरकारले के योजना बनाएको छ ? भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा मन्त्री यादवले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अध्ययन र उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै बहुमूल्य पत्थरको उत्पादन र प्रशोधन गरी निकासीसमेत गरिने जानकारी गराए । चोरी–निकासी नियन्त्रणका लागि सबै उपाय अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनयता भएको सवारी दुर्घटनामा आठको मृत्यु
नेपाल प्रहरीको सामाखुसीस्थित पेट्रोल पम्पबाट बिक्री गरिएको पेट्रोलमा पानी मिसिएको भेटिएको छ। पम्पबाट शनिबार बिक्री गरिएको पेट्रोलमा पानी मिसिएको भेटिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका ...